မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဖူးစာဆုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် (၈)
Posted by mabaydar at 5:36 PM
ဖတ်စ်ဝေါ ဟိုတယ်ကြီးပါကွယ် ဂျန်းတင်းက
comment ပေးမယ်ပေမယ်နဲ့ သေသေချာချာပြန်ဖတ်ပြီးမှ ပေးချင်လို့ ဒီနေ့မှပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ သိပ်တော့ မဝေဖန်တတ်ဘူးနော် အခုထိဇာတ်လဲမအီဘူး။ တပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ နေရာလေးလဲကောင်းတယ်။ အဟီး ဒီလောက်ပဲပြောတတ်တယ် မဗေဒါ။ အားပေးလျက်ပါ။
6/03/2012 3:05 PM
အပေါ်ကတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ဖောင့်က မမြင်ရဘူးနော်... ဒါပေမဲ့ မှန်းပြီးဖတ်ထားပါတယ်...
ဒီလကုန်တော့ နောက်အပိုင်းတက်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး... ၁ပတ်လောက်တော့ အချိန်ပိုပေးပါလား... ဟီး..
6/29/2012 4:19 PM
မဗေဒါရဲ့နောက်ဆုံးပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းကို ၁ကနေ ၈ထိ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မဗေဒါပြောသလိုပဲ ဇာတ်လမ်းက ရုပ်ရှင်တအားဆန်နေတယ်။ စကားပြောတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဖော်တာများတော့ ဇာတ်လမ်းက တအားသွက်နေတယ်။
အပိုင်း (၂) အဖြတ် ၄လောက်မှာတွေ့ရတဲ့ စကားလုံးအသားပေးတဲ့ ခံစားမှု သရုပ်ဖော်ရေးသားပုံမျိုးလေးတွေ ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
မဗေဒါပြောသလိုပဲ စာဆိုတာ တကယ်ရေးကြည့်မှ ၏ သုံးမလား၊ သည် သုံးမလား၊ မည်သုံးမလား၊ ပါမည် သုံးရမလားဆိုတာလေးက အစ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
ထုံးစံအတိုင်းပဲ အားပေးလျှက် Fighting!! :)
P.S မနေ့က ကောမန့်က ဘာလို့လဲ မသိ.. ပေါ်မလာလို့ မှတ်မိသလောက် ထပ်ရေးလိုက်တာပါ မဗေဒါ
7/03/2012 3:35 PM
ခုလို သေသေချာချာပြောပြ ဝေဖန်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်လက်ကြိုးစားပါအုံးမယ်...
ma,i am waiting for episode(9),if u have been written this ,can u show me it is?
9/04/2016 4:46 PM
may moe kha said...
lol,show where is episode (9) ????
9/04/2016 4:48 PM
plz,tell me where is episode(9)???
9/04/2016 4:49 PM
Dear May Moe Kha,
Very sorry for my late reply. Actually I haven't finished writing (to be honest, i have stopped writing) this fiction. Hee hee... I know I am guilty for that. I just lost confident in myself. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၀တ္ထုရေးတာ မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရလို့။ ဖွဲ့ကာနွဲ့ကာ သိပ်မရေးတတ်ဘူးထင်လို့ မဆက်ဖြစ်တော့တာ။
ဖတ်တဲ့သူ မရှိဘူးလဲ ထင်လို့။